အမေဇုံဂီတအကန့်အသတ်မဲ့ - ၃ လသာယူရို ၉.၉ သာ Androidsis
အမေဇုံဂီတအကန့်အသတ်မဲ့ - သုံးလကြာဂီတကို ၀.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့သာရနိုင်တယ်
အက်ဒါဖာရီနို | | အခမဲ့ဂီတ, NOTICIAS
Amazon Music Unlimited သည်လူကြိုက်အများဆုံးဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် အမှန်တကယ်ကနေ။ Spotify သို့မဟုတ် Apple Music ကဲ့သို့သောအခြားပလက်ဖောင်းများအတွက်ပြိုင်ဘက်စစ်စစ်ဖြစ်သည်။ ငါတို့လွှတ်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ငါတို့ပြောပြီးပြီ။ ယခုအမေဇုန်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တိုးမြှင့်ပေးမှုကိုရရှိစေသည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သုံးလ subscription ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သံသယမရှိဘဲ, အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်း Amazon Music Unlimited ရှိဂီတအားလုံးကိုခံစားကြည့်ပါကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေးကိုရှာဖွေဘယ်မှာ။ အချိန်ကျော်ဒီပလက်ဖောင်းသို့ထည့်သွင်းခဲ့ကြသောများစွာသောအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပြင်။ ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို Amazon မှာထားခဲ့တာကတစ်ခုတည်းသောအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
1 Amazon Music Unlimited တွင်မြှင့်တင်ရေး
2 Amazon Kindle Unlimited ကိုအခမဲ့ရယူပါ
3 Amazon Prime Video တွင်အကောင်းဆုံးစီးရီးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေပါ
Amazon Music Unlimited တွင်မြှင့်တင်ရေး
ဤမြှင့်တင်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Amazon Music Unlimited တွင်သုံးလကြာဂီတကို ၀.၉၉ ဒေါ်လာသာရှိသည်။ လူကြိုက်များသော platform တွင်သီချင်းပေါင်းသန်း ၅၀ ရရှိရန်အတွက်ယူရို ၁ ဒေါ်လာအောက်သာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ဤပလက်ဖောင်းမှပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အားသာချက်များအားလုံးကိုသိလိုပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်ကောင်းသည့်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီသုံးလပေးသွင်းခြင်း, သင်ဒီမှာရယူနိုင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန့်သတ်ချက်များမရှိသည့်အပြင်ဂီတအားလုံးအားကြော်ငြာများသို့မဟုတ်ကြားဖြတ်မပါဘဲနားထောင်နိုင်သည်။ နေ့တိုင်းလိုချင်တဲ့သီချင်းတွေကိုနားထောင်နိုင်တယ်။ ငါတို့သည်လည်းနိုင်ပါလိမ့်မည် အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲဂီတကိုနားထောင်ပါ.
အကောင်းဆုံးက Alexa မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လက်ဖြင့်လုပ်သောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အမေဇုံဂီတအကန့်အသတ်နှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သည်၊ တစ် ဦး အမေဇုံ Echo စပီကာကိုဝယ်ကြလော့, သင်သည်ဤ function ထဲကအများကြီးအများကြီးရနိုင်တော့မည်။ သင်အချိန်တိုင်းနားထောင်ချင်သောသီချင်းကို Alexa ကိုသာမေးရန်လိုသည်။
သင်သည်ဤပရိုမိုးရှင်းမှဇန်နဝါရီ ၂ ရက်အထိအကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီဟာက Amazon Music Unlimited ဖောက်သည်တွေအတွက်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုပဲ။ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည်ပုံမှန်ပေးသွင်းသည့်စျေးနှုန်းသို့ရောက်ရှိသွားတော့မည်။ ပရိုမိုးရှင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီလင့်ခ်မှာကြည့်ပါ.
Amazon Kindle Unlimited ကိုအခမဲ့ရယူပါ
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီကိစ္စမှာအမေဇုံကငါတို့ကိုစွန့်ခွာတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ အခုမင်း p ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်အခမဲ့ Kindle ခိုးယူ။ ၎င်းသည်သင်၏ Kindle တွင်လွယ်လွယ်ကူကူသုံးနိုင်သောခေါင်းစဉ်ပေါင်းသန်းတစ်သန်းကျော်ကိုသင်ရရှိရန်ခွင့်ပြုထားသော subscription တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စာအုပ်အမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
အမေဇုံကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးတယ် ရက် ၃၀ အတွင်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူပါ။ Kindle ရှိသုံးစွဲသူများအား၎င်းမှရရှိသောကောင်းကျိုးများအကြောင်းလေ့လာရန်အချိန်လုံလောက်သည်။ ထို့အပြင် Kindle Unlimited တွင်ရရှိနိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်များရွေးချယ်ခြင်းသည်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာနေသဖြင့်သင်စိတ်ဝင်စားသောအရာတစ်ခုအမြဲရှိသည်။ ဤရက် ၃၀ အခမဲ့အခကြေးငွေကိုသင်ရယူနိုင်သည် ဒီ link.
Amazon Prime Video တွင်အကောင်းဆုံးစီးရီးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေပါ
အမေဇုံမှာလူတိုင်းအတွက်အကြောင်းအရာရှိတယ် Amazon Music Unlimited အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းရှာနိုင်သည် ၎င်း၏ဗီဒီယို streaming ပလက်ဖောင်း, Prime ဗီဒီယို။ ၎င်းတွင်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံတကာဆုများစွာကိုရရှိခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ကားများကိုဖန်တီးနေသည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စီးရီးများကိုအချိန်အတန်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်အများအပြားကိုလည်းကြည့်နိုင်သည်။
Prime Video မှာကတည်းကငါတို့ပါ Inglourious Basterds၊ Grinch၊ Fight Club နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်များ။ မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်ရုပ်ရှင်၊ စီးရီးနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးကို ၀ င်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသံသယမရှိပါ။ အဲဒီမှာလူတိုင်းအတွက်အကြောင်းအရာရှိပါသည်။
Prime Video တွင်တွေ့ရသောအကြောင်းအရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုသိလိုပါက၎င်းတို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဒီ link။ ဤတွင်သင်အပေါငျးတို့သရှာပါ သင်ရရှိနိုင်သောစီးရီး၊ ရုပ်ရှင်နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် လက်ရှိထဲမှာ။ အကယ်၍ သင်၏ Amazon တွင် Amazon အကောင့်တစ်ခုရှိပါက၎င်းတို့အားလုံးကိုအခမဲ့ရယူနိုင်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်စျေးသက်သက်သာသာနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့ကိုအကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်တွေကိုရှာဖွေချင်ပါသလား သူတို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် ဒီ link။ မှအကျိုးခံစားရမည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည် အနက်ရောင်သောကြာနေ့၏ယခုအပတ်အကောင်းဆုံးအထူးလျှော့စျေး။ သူတို့မလွတ်ပါစေနှင့်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာကန့်သတ်အချိန်အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အမေဇုံဂီတအကန့်အသတ်မဲ့ - သုံးလကြာဂီတကို ၀.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့သာရနိုင်တယ်
အက်ပလီကေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်မှုအသစ်နှင့်အတူသင် Instagram တွင်အချိန်ဖြုန်းနေမှုကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း